Nepal Samaya | कौशल काफ्ले
कांग्रेसलाई ०७४ कै 'सरप्राइज' दिने कसरतमा बामपन्थी दल
कम्युनिस्ट घटकहरु एक भएर चुनावमा जानुपर्ने भन्दै भित्रभित्रै छलफल गरिरहेका छन्। आन्तरिक रुपमा गरिएका यस्ता छलफलले कतै ०७४ सालकै 'सरप्राइज' यसपटक दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका भइरहेको छ।
नेकपा एसका मन्त्रीको ‘सकसपूर्ण’ बहिर्गमन
आइतबार साँझ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिवले झाक्रीको तारिफ गर्दै उनलाई बोल्न आग्रह गरे। तर, झाँक्री भने सुँक्कसुँक्क गर्दै 'टिस्यु पेपर'ले आँखा र नाक पुछिरहेकी थिइन्।
विवादको भुमरीमा नेकपा एस
अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेता झलनाथ खनालले तत्काल मन्त्री हेरफेर गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका बेला बहालवाला ४ मन्त्रीसहित १० सांसद विपक्षमा उभिएर नेपाललाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि पार्टीभित्र मात्र सीमित विवाद छरपस्ट भएको हो।
पदाधिकारी चयनको 'प्रसव पीडा'मा प्रचण्ड
पूर्वमाओवादी सबैलाई जोड्ने विषय छिटै टुंगोमा पुग्ने दाबी गरेका प्रचण्डले आफ्नै पार्टीमा भने पदाधिकारी चयन गर्न सकेका छैनन्। महाधिवेशन सकिएको ६ महिना पुग्नै लाग्दा पनि पदाधिकारीको चयन गर्न प्रचण्डलाई 'फलामको च्यूरा' चपाउनु सरह भएको छ।
चाँदीको ताल्चा खोलेर उद्घाटन गरिएको त्यो त्रिचन्द्र क्याम्पसको यस्तो हालत!
२७ असोज १९७६ मा आएर राजा त्रिभुवनले कलेजको उद्घाटन गरेका थिए। चाँदीको ताल्चा र चाँदीकै साँचोले खोलेर कलेज भवनको उद्घाटन गरिएको थियो। ढुंगा, इँटा, चुना, सुर्ती, काठ, फलाम जस्ता सामग्री प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको यो भवन सम्पन्न गर्न १४ महिना लागेको थियो।
काया फेर्दैछ ‘थिंकट्यांक’ सिनास
लामो समयदेखि बन्द भएका महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानात्मक जर्नलहरूलाई पुनः प्रकाशनमा ल्याएर वास्तविक काया फेर्ने जमर्कोमा छ सिनास।
नाम मात्रैको 'थेसिस स्क्यानिङ'
सफ्टवेयर खरिद गरेको एक वर्ष बितेको छ। तर यो प्रणाली पनि प्रभावकारी भने देखिएको छैन। त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयकाअनुसार हालसम्म ४५० वटा शोधपत्र मात्र 'स्क्यान' गरेको छ। यो तथ्यांक मंगलबारसम्मको हो।
देउवालाई दोष दिँदै वाम एकताको कसरत!
नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका केही नेताहरुले देउवा नेतृत्वको सरकार चीनविरोधी भएको आरोप लगाउँदै मुलुकमा वाम एकताका लागि जोडबल गरिरहेका छन्।
विद्यार्थी संगठनको 'गुन्डागर्दी'ले हायलकायल प्राध्यापक
कक्षा सकेर ‘टिचर रुम’मा जाने क्रममा उपप्राध्यापक पाण्डेमाथि विद्यार्थीको समूहले कुटपिट गरेको थियो। 'केही बेर एकान्तमा कुरा गर्नु छ' भन्दै उपप्राध्यापक पाण्डेलाई विद्यार्थीले कुटपिट गरेको उनको भनाइ छ। क्याम्पसको छाप दुरुपयोग गरेको आरोप लागेपछि ती विद्यार्थीले उपप्राध्यापकमाथि हातपात गरेका थिए।